ကလိုစေးထူး: ခါဂျီး...၊ ခါဂွေး...၊ ဂါးနီ (နောက်ဆက်တွဲ)
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:33 PM
ကိုစေးထူးရေ အကိုရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ပိုလို့တောင်လေးစား အားကျမိပါတယ်အကို။ ကိုယ်ရဲ့လုပ်ရပ်တခုကို တာဝန်အပြည့်ယူရဲ့တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အားကျပါတယ်။ လေးစားလျက်
Dec 3, 2008, 12:31:00 AM
အင်းး စမိမှတော့ ဆုံးအောင်လုပ်ရတော့မယ် ။
တကယ်တော့ သိပ်အရေးကြီးသလားဆိုတော့ အရေးမကြီးလှပါဘူး
ပြောချင်ရာ ပြောနေတဲ့လောကကြီးထဲ အမှားတခု ထပ်တိုးလာလို့ လဲ တယ်မထူးပါဘူး
ဒါပေမဲ့ဗမာလူမျိုးတယောက်လောက်များ ဒီစာဖတ်ပြီး ကားမောင်းသင်ရတာ တယ်ခက်ပါလား ထင်သွားရင် ငါမြင်ရက်နဲ့တာဝန်မကျေဘူး ဖြစ်မှာလဲ စိုးရသေးတာကိုး ။
၁) ရှေ့ ပိုင်းက ဘာညာ သာရကာကတော့ ထားပါ ။ sob story ခေါ်တာပေါ့ ။ ဒါမျိုးက သနားချင်တဲ့ သူ သနားနိုင်ပါတယ် ။ ပြောစရာအထူးမရှိ ။
၂) မှန်လိုက်လေဗျာ ။ ကားမောင်းဘို့ အရည်အချင်းမရှိတဲ့ သူ ကားပေါ်တင်တာ ဆရာဝန် ကလေးဖျက်ချတာနဲ့ဘယ်လာတူပါ့မလဲ ။ ဆရာဝန်သတ်တာက ကလေးတယောက် ။ ဒရိုက်ဗာ သတ်ရင်အပုံလိုက် ။
၃) ဒါကတော့ အရေးအကြီးဆုံးပါ ။ လေရှည်တယ်ထင်လဲ ခံရမှာဘဲ ။
အမောင်းသင် လူတယောက်ကို ကိုယ့့် ကားပေးမောင်းချင်ရင် အလွယ်လေး ။
ဘာမှ လူစွမ်းကောင်းကြီးလုပ်ပြီး ခိုးသင်စရာမလိုပါဘူး
အာမခံကုမ္ပဏီကို ဖုန်းဆက်လိုက် ။ ကို ယ့် ရဲ့အာမခံမှာ co-driver အဖြစ်နဲ့အဲလူရဲ့သင်မောင်းလိုင်စင်ကို add ရုံပါဘဲ ။
တချို့ ကုမ္ပဏီက ပိုက်ဆံ နဲ နဲ ( မိမိ အာမခံရဲ့၂၀ % မှ ၅၀ % ထိယူတယ် ။ တခါတလေ သဘောကောင်းရင်မယူတာလဲ တွေ့ ရဘူးပါတယ် ။ )
ခုတော့ လိုင်စင်ဖြေတာ လိမ်တာကို ခုခံကာကွယ်ရင်း အာမခံမရှိဘဲ ကားမောင်းသင်တာပါပေါ်လာတော့
အင်းး ညောင်မြစ်တူး ပုတ်သင်ဥပေါ်တော့တာပေါ့လေ ။
ကိုရင် သိထားဘို့ က သင်မောင်းသမားကို အာမခံကုမ္ပဏီရဲ့ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ကားပေးမောင်းလိုက်တော့ အဲသင်မောင်းသမားက ကားစက်နှိုးလိုက်တာနဲ့ကိုရင့် အာမခံသည် null and void ဖြစ်သွားပြီ ။ ဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ကိုရင် တို့ ၂ယောက်က ကားတိုက်လို့ သေရင်ဖြစ်စေ။ ကိုရင်တို့ က တစုံတဦးကို ထိခိုက်မိရင်ဘဲဖြစ်စေ ။အာမခံကုမ္ပဏီက လျော်မှာမဟုတ် ။
အဲ ကိုရင်တို့ ၂ယောက်က ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ်သေတာက ကိစ္စမရှိပါ ။ ကိုရင်တို့ နဲ့ထိခိုက်မိတဲ့တပါးသူသည် အလျော်မရနိုင်လို့သေရင် သူ့ မိသားစု ဒုက္ခရောက်မယ် ။ မသေဘဲ ဒုက္ခိတဖြစ်ရင် သူရော သူ့ မိသားစုပါ ဒုက္ခရောက်မယ် ။
နောက်ဆုံးစာဖတ်သူတွေကို ပြောချင်တာက လောကမှာ စည်းကမ်းဆိုတာ ရှိပါတယ် ။ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာက စည်းကမ်းလေးတွေတော့ သိအောင်လုပ်ထားကြပါဗျာ ။
ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ရှိလာရင် ဒီလို မရေမရာ စာမျိုး ဖတ်ပြီး အတုမခိုးကြပါနဲ့။ သက်ဆိုင်ရာ ဋ္ဌာနတွေကို မေးကြပါ ။ နိုင်ငံများရာစုဟာ ဗမာပြည်မဟုတ်ပါ။ ဋ္ဌာနတိုင်းမှာ ကူညီဘို့PR ၀န်ထမ်းတွေ သေချာခန့် ထားပါတယ် ။ မေးရင်လဲ သေချာဖြေပေးကြပါတယ် ။ အဲဒါပါဘဲ ။
Dec 3, 2008, 4:40:00 AM
ကျွန်တော်က အနုပညာကို အနုပညာလိုပဲ ခံစားပါတယ်။
ရင်ကျက်ပြီးသား လူဟာ အတုယူသင့်တာကို သူ့ဘာသာသူ အတုယူသွားပါလိမ့်မယ်။
အဲလိုသာ မဟုတ်ရင် လူသတ်ကား၊ စိတ္တဇကားတွေ ရိုက်ကူးပြသနေတာမျိုးတွေ ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါဘူး။
စာတစ်ပုဒ်၊ ပို့စ်တစ်ခုအတွက် ရေးသားသူတင်မဟုတ်ပါဘူး လက်ခံဖတ်ရှုတဲ့သူမှာပါ တာဝန်အနည်းနဲ့အများ ရှိတဲ့လို့ ယူဆမိပါတယ်။
Dec 3, 2008, 10:34:00 AM
tint comment is bullshit..
he should learn what is car insurance before he said.
Dec 3, 2008, 12:13:00 PM
(စမိမှတော့ ဆုံးအောင်လုပ်ရတော့မယ်…) ဆိုလို့ နဲနဲ ၀င်ပြောပါအုံးမယ်..။
စကတည်းက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေးပဲ မြင်စေချင်လို့ ခပ်ပါးပါးလေးပဲ ရယ်စရာလေးစွက်ပြီး ပြတဲ့ဟာကို လေးလေးလံလံရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး မြင်ကြတော့ စာရေးသူ ပေးချင်တာ မရသူတွေလဲရှိ..။ရပေသော်လည်း အခွင့်ကောင်းပေပဲလို့ တွေးပြီး ဆော်ချင်သူလဲရှိ..။ပေးတဲ့အတိုင်း ရသွားပြီး ခပ်ပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ ဟာသအပိုင်းလေးကို ခံစား..ကျန်တဲ့အပိုင်း ကိုယ့်ဖာသာ ဖြည့်စွက်တွေးယူသွားသူတွေလဲ ရှိ..။
၁) စာရေးသူက သူကူညီပုံနည်းဟာ မှန်ကန်တဲ့နည်းမဟုတ်ကြောင်း သူ့ဖာသာလဲ သိတယ် ၀န်လဲခံတယ်။
၂) သူပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့လေးနောက်ကွယ်က သူထည့်မရေးတဲ့ ကိစ္စတွေအကြောင်းလဲ ထည့်ရေးရှင်းပြသေးတယ်
၃) သူကူညီထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက် သူတာဝန်ယူထားကြောင်းလဲ ပြောပြတယ် (တာဝန်ယူပုံ မှန်မမှန်၊ အာမခံ ဥပဒေတွေ ဘာတွေက တကဏ္ဍပါ။ အဓိက က တာဝန်ယူတဲ့ စိတ်ဓါတ်။ ကူညီတတ်တဲ့စိတ်ဓါတ်ပဲ)
၄) ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့က ဘာဆိုတာ ကျုပ်လို စာဖတ်သူတွေတော့ နားလည်တယ်။ စည်းကမ်းတွေအကြောင်း ပိုပီး ရေရောရာရာ သိချင်ရင် US Dept. of Transportation ၀က်ဆိုက် သွားကြည်ရုံပ
၅)စာေ၇းသူရဲ့ အာမခံ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အာမခံရခြင်း မရခြင်းကိစ္စ သူပဲအသိဆုံးနေမယ်..ဘာမှထွေထူးပြောနေစရာ အကြောင်းမရှိ။
ဒီစာမှာ ရေးထားတဲ့ အထဲက မရေမရာ အချက်တွေကို အတုခိုးရလောက်အောင် ၀မ်းစာမပြည့်တဲ့ စာဖတ်သူလဲ သိပ်ရှိလှမယ်မထင်ပါဘူး...။ ယူတတ်ရင် ရပါတယ်။ ဒါလောက်ပါပဲ..။
Dec 4, 2008, 3:57:00 AM
ဘာမှမပြောတော့ဘူးနော်.. ကိုဟန်သစ်နဲ့ ကိုနန္ဒပြောတဲ့အတိုင်းပဲး-)
Dec 4, 2008, 4:06:00 AM
အင်း အငြင်းအခုံလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ မြိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပဲ ခံစားသွားပါတယ် ... ကို ကလိုစေးထူးရေ ...။ ကျွန်တော် ဒီ blog ကိုလာလည်တာ ကားမောင်းသင်ဖို့ ... အာမခံဝယ်ဖို့မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ် ...။ :) ... ပျော်စရာလေးတွေကို ဘယ်လိုဖတ်လိုက်ပြီး ... အပြစ်မြင်လဲတော့ မတွေးတတ်တာ အမှန်ပဲ ...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အာမခံကြေးကိစ္စကိုတော့ tint ပြောတာ ဗဟုသုတ ရပါတယ် ...။ မရေမရာဆိုတာကိုတော့ လက်မခံပါဘူး ... ရသစာပေမှာ သုတမပါရကောင်းလားလို့ပြောလို့မရပါဘူး ...။ .....
ဒီလိုပြောကြေးဆိုရင် ဘုရားဟောမှာ Java Programming အကြောင်းမပါတာကို ကျွန်တော် ထောက်ပြချင်ပါတယ် .... ဟဲဟဲ ...။ မရေရာဘူးလို့တော့ မပြောရဲပါဘူးဗျာ ... ။
ပျော်ရွှင်စရာ blog လေးကို ဆက်ပြီးအားပေးနေဦးမှာပါ ...။ ကျေးဇူးပြုပြီး ... ရသစာပေကို ရသစာပေလို့နားလည်ပေးကြပါ ...။
Dec 6, 2008, 9:26:00 AM
Keep on doing what u think. I agree with you. But just care and concer on the situation when u teaching him......
Dec 6, 2008, 10:57:00 PM